Isdhexgalka CHPW API Portal Xeerarka iyo Xaaladaha Isticmaalka - Caymiska Caafimaadka Deegaanka Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Nala soo xiriir > Xariirka Horumarinta Isdhexgalka ee CHPW > CHPW Interoperability API Portal Developer Shuruudaha iyo Shuruudaha Isticmaalka
CHPW Interoperability API Portal Developer Shuruudaha iyo Shuruudaha Isticmaalka
Fadlan si taxaddar leh u akhri Shuruudahaan ka hor intaadan isticmaalin Xariirka Horumarinta API ee CHPW Interoperability API.
Taariikhda Dhaqan galka: Julaay 1, 2021
Fadlan u akhri Shuruudahaan iyo Shuruudaha ("Shuruudaha") si taxaddar leh oo dhammaystiran ka hor intaadan isticmaalin Xariirka Horumarinta ee 'CHPW Interoperability API Developer Portal' oo laga heli karo http://appregister.chpw.org/ (si wada jir ah, "Goobta") ama adeeg kasta ama macluumaad kasta oo laga bixiyo ama la xiriirta barta Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington ama xiriir la leh Shabakadda Caafimaadka Bulshada ee Washington (si wada jir ah, "CHPW") (oo ay weheliso Bogga, si wada jir ah, Adeegga). Adoo gujinaya "Waan Aqbalay" Shuruudahaan ama adoo adeegsanaya Adeegga (oo ay ku jiraan marin u helid kasta oo Adeegga ah), waxaad si cad u oggolaatay inaad ku xirnaato Shuruudaha, adiga iyo inta udhaxeysa adiga iyo CHPW, oo kujira tixraacan wixii shuruudo iyo shuruudo dheeri ah ah by CHPW iyada oo loo marayo Bogga, ama haddii kale ay kuu diyaarisay adiga CHPW. Shuruudahaan ma xukumaan isticmaalkaaga boggaga ama barnaamijyada kale. Macluumaadka iyo ilaha ku jira isla markaana lagu heli karo Adeegga waxaa diyaariya CHPW qaar ka mid ah horumariyeyaasha dhinac saddexaad, oo ay ku jiraan horumariyeha adiga ku shaqeeya ("Shirkaddaada") oo ku xiran heshiiskaaga Shuruudahaan iyo Shuruudaha Adeegsiga.
Adoo adeegsanaya Adeegga, waxaad cadeyneysaa inaad da'da sharciga aad ku raacsantahay Shuruudahaan oo aad tahay isticmaale idman oo Adeeg ah oo wakiil ka ah Shirkaddaada.
CHPW waxay cusbooneysiin kartaa Shuruudahaan adiga oo kugu ogeysiinaya cusbooneysiinta noocaas ah iyadoo loo marayo qaab kasta oo macquul ah, oo ay kujirto iyadoo lagu dhejinayo Shuruudaha la cusbooneysiiyey Boggan. Wixii cusbooneysiin ah ee Shuruudahaan laguma dabaqi doono wax khilaaf ah oo idinka dhexeeya adiga iyo CHPW oo soo ifbaxaya ka hor taariikhda aan ku dhejinay Shuruudaha la cusbooneysiiyey, ama haddii kale aan kugu wargelinno Shuruudaha noocan oo kale ah. Halyeeygii "Cusboonaysiinti Ugu Dambeysay" ee kor ku xusan waxay muujineysaa markii Shuruudahaan markii ugu dambeysay la beddelay Sii wadida adeegsiga ee Adeegga wixii cusbooneysiin ah ee Shuruudahaan waxay noqon doontaa ogeysiis iyo aqbalaad kasta oo cusbooneysiin ah.
Iyadoo loo marayo Boggan, CHPW waxaa laga yaabaa inay ku siiso inaad hesho dukumiintiyo, adeegyo diiwaangelin, adeegyo sanduuqa horumariyaha, iyo adeegyo kale oo horumarineed oo laxiriira isdhexgalka barnaamijyada barnaamijyada CHPW - “Bukaanka Helitaanka Bukaanka” iyo Tusaha Bixiyeyaasha API ”(wadajirka,“ API-yada ”) ) - oo la siiyay iyadoo la raacayo CMS Isdhexgalka iyo Sharciga Kama-dambaysta ah ee Helitaanka Bukaanka (CMS-9115-F). Tixraacyada "Adeegga" ee Shuruudahaan waxaa ka mid ah marin u helkaaga iyo ku xirnaanta iyo adeegsiga API-yada.
Xisaabaadka / Diiwaangelinta
Si loo helo API-yada, waxaa lagaa doonayaa inaad bixiso macluumaad gaar ah (sida aqoonsi ama faahfaahinta xiriirka) oo qayb ka ah nidaamka diiwaangelinta API-yada, ama qayb ka mid ah sii wadida adeegsigaaga API-yada. Waad mataleysaa oo aad damaanad qaadeysaa in dhammaan iyo dhammaan macluumaadka diiwaangelinta ee aad siiso CHPW ay noqdaan kuwo sax ah oo cusbooneysiiya waana inaad si dhakhso leh ugu wargelisaa CHPW wixii cusbooneysiin mustaqbalka ah si aan kuugu ogeysiinno wixii isbeddel ah ee ku yimaada Adeegga ama Shuruudahaan, oo laga yaabo inay saameyn ku yeelashada adeegsigaaga API-yada.
Aqoonsiga horumariyaha (sida furaha sirta ah, furayaasha, astaamaha, iyo aqoonsiga macmiilka) ee ay ku siisay adiga CHPW waxaa loogu talagalay in ad adigu kaliya adigu adeegsato isla markaana aad ku garatid softiweer kasta oo aad isticmaaleyso API-yada. Adiga ayaa mas'uul ka ah dhammaan bayaannada la soo saaray iyo ficillada ama ka-tagga ee dhaca inta la adeegsanayo Aqoonsigaaga Kobcinta. Waxaad ogolaatay inaad ka dhigto Aqoonsigaaga Horumarinta mid qarsoodi ah oo aad sameyso dadaal macquul ah si looga hortago dadka kale ama hay'adaha kale inay galaan ama isticmaalaan aqoonsigaaga horumariyaha. Adiga ayaa mas'uul ka ah jabinta amniga oo ay keento guuldarradiisa inaad ilaaliso asturnaanta Aqoonsigaaga Horumarinta. Waxaad ogolaatay inaad si dhakhso leh ugu wargalisid CHPW haddii ay dhacdo lumitaan ama xatooyo Aqoonsigaaga Soo-saare, ama haddii aad rumeysan tahay in sir-ahaantaada Aqoonsigaaga Horumar lagu waxyeelleeyey si uun, ama haddii ay dhacdo inaad wax ka barato isticmaalka suurtagalka ah ama dhabta ah ee aan la oggolayn Adeegga.
Waxaad kuheli kartaa oo kaliya (ama isku dayi kartaa inaad gasho) midkasta oo kamid ah API-yada qaababka lagu sharaxay dukumiintiyada API-gaas. Haddii CHPW ay kuu xilsaarto Aqoonsiga Horumarinta, waa inaad ku isticmaashaa iyaga API-ga ku habboon. CHPW waxay xaq u leedahay inay ka noqoto Aqoonsigaaga Kobcinta iyo / ama marin u helka API-yada waqti kasta iyadoon ogeysiis hore loo helin ku guuldareysiga inaad u hogaansanaato Shuruudahaan ama meesha CHPW ay si macquul ah u go'aamiso inaad marin u hesho APIs waxay soo bandhigeysaa heer aan la aqbali karin oo halista ah amniga nidaamka CHPW.
Haddii lagu siiyo aqoonsi dalab waxsoosaar ah API-yada, waxaad u isticmaali kartaa oo keliya aqoonsiyadaas arjiga ka diiwaangashan CHPW helitaanka wax soo saarka. CHPW way kala noqon kartaa aqoonsigaaga wax soo saar haddii aad isticmaasho ama aad isku daydo inaad u isticmaasho codsi kale ama shey aan ka diiwaangashanayn CHPW helitaanka wax soo saarka.
Xeerarka Isticmaalka iyo Shuruudaha
Iyada oo ku saleysan Shuruudahaan oo waafaqsan dokumentiyada API iyo sharciga ku habboon, oo ay ku jiraan CMS Interoperability iyo Buugga U Dambeynta Helitaanka Bukaanka (CMS-9115-F), waxaad isticmaali kartaa oo keliya: (a) Bukaanka Helitaanka Bukaanka si aad ula soo baxdo, oggolaanshaha iyo jihada xubinta la adeegsan karo ee CHPW ama wakiilka shakhsiga ee xubinta ah, xog gaar ah, sida lagu dabaqi karo, oo ku saabsan sheegashooyinka la xukumay, la kulanka xogta laga helo bixiyeyaasha xiisaha leh, xogta qaaciddada, iyo xogta caafimaad qaarkood, haddii CHPW ay hayso xog kasta oo noocaas ah; (b) Diiwaanka Bixiyaha ee API si loo soo helo, sida ay khuseyso, bixiyeyaasha qaar ee CHPW iyo macluumaadka hagaha farmasiga; iyo (c) adeegyada sanduuqa kobcinta si loo tijaabiyo ku xirnaanta dalabkaaga API-yada.
Waxaa laga yaabaa inaadan: (a) u helin API-yada qaab kale oo aan ahayn khuseeya oo ka diiwaangashan CHPW si loo helo API-yada; (b) kala-daadinta, kala-goynta, injineerka gadaal, ama haddii kale iskudayo soo-saarid, dib-u-dhisid, aqoonsi, ama daah-fur koodh koodh kasta ah, fikradaha asaasiga ah, ama algorithms ee Adeegga si kasta ha noqotee, marka laga reebo illaa xaddidaadda xaddidan ee horay loo mamnuucay ay khusayso sharciga; ama (c) ka saar wixii ogeysiisyo, calaamado, ama calaamado ah Adeegga ah. Waxaad ogolaatay inaad u adeegsato Adeegyada kaliya ujeedooyin sharci ah. Waxaad ogolaatay inaadan carqaladeyn ama isku dayin inaad carqaladeyso howlaha Adeegga sinaba. Dhaqan kasta oo aad adigu sameyso, oo sida macquul ah ay u go'aamiso CHPW, xaddido, xakameyso, ama farageliso awoodda isticmaale kasta oo kale si ay u adeegsadaan Adeegga (oo ay ku jiraan iyadoo la jabsanayo ama la jebinayo qeyb ka mid ah Adeegga, ama ku lug lahaanshaha been abuur, daadad , ama hawlo kale oo qas ah) waa mamnuuc. Waa inaadan gudbin ama si kale u dhigin adoo adeegsanaya ama xiriir la leh Adeegga fayras kasta, dixirig, faras Trojan, ukunta Easter, bambada waqtiga, spyware, ama koodh kale oo kombiyuutar ah, feyl, ama barnaamij dhib ama waxyeelo u geysan kara ama wax u dhimaya ama loogu talagay in la waxyeeleeyo ama la afduubo hawlgalka, ama in lala socdo isticmaalka, ama qalabka, softiweerka ama qalabka.
Adiga iyo arjigaaga waxaad kaliya marin u heli kartaa, ku xirmi kartaa, iyo / ama dib uga soo qaadan kartaa xogta mid kasta oo ka mid ah API-yada ka dib marka adiga iyo cidda aad khuseyso aad si guul leh uga diiwaangashan tahay CHPW soo-saarista helitaanka API-ga la adeegsan karo. Ma heli kartid, kuma xirmi kartid, dib uma soo ceshan kartid xogta, ama uma isticmaali kartid qaab kasta oo Helitaanka Bukaanka APII marka laga reebo oggolaanshaha iyo jihada xubinta ka tirsan CHPW ama wakiilka shakhsi ahaaneed ee xubinta.
Adeegsigaaga API-yada waxay ku xirnaan doontaa xadidaadyo gaar ah oo ku saabsan marin u helka, wicitaanada, ama u isticmaal sida ku xusan Shuruudahaan iyo Shuruudahaan ama haddii kale ay bixiso CHPW. Xaddidaadyadan waxaa loogu talagalay in lagu maareeyo culeyska nidaamka, kor u qaadista helitaanka sinnaanta, iyo ka hortagga xadgudubka, iyo xaddidaadahaas waxaa lagu hagaajin karaa ogeysiis la'aan, sida loo arko inay lagama maarmaan u yihiin CHPW. Haddii CHPW ay si macquul ah u aaminsan tahay inaad isku dayday inaad dhaafto ama dhaafto xadkaas, awoodda aad u leedahay inaad adeegsato API-yada si ku meelgaar ah ama joogto ah ayaa loo xannibi karaa. CHPW waxay kormeeri kartaa isticmaalkaaga API-yada si, tusaale ahaan, u hagaajiso adeegga ama u xaqiijiso u hoggaansanaanta Shuruudahaan.
Sida udhaxeysa adiga iyo CHPW, CHPW ayaa iska leh Adeegga. Qaybaha Adeeggu waxay ku xirnaan karaan xuquuqda hantida aqooneed ee ay hayaan CHPW iyo alaab-qeybiyeyaasha saddexaad iyo kuwa wax iibiya. Ogaysiis kasta oo aqooneed aqooneed, sida summad ganacsi ama ogeysiisyo xuquuqda daabacaada ah, lama tirtiri karo ama lama beddeli karo sinnaba. Calaamadaha ganacsiga iyo xuquuqda daabacaadda ee CHPW looma isticmaali karo iyadoo lala xiriirinayo wax soo saar ama adeeg kasta oo aan lagu bixin ama wakiil ka aheyn CHPW.
Soo gudbintaada macluumaadka adoo adeegsanaya Adeegga waxaa xukumaya CHPW Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah. CHPW waxay shaaca ka qaadi kartaa macluumaadkaaga si ay ugu hogaansanto qawaaniinta, amarrada, subpoenas, ama habab kale oo sharci ah, ama si ay macluumaad u siiso hay'ad dawladeed ama rasmi ah oo codsata macluumaadkaas.
Markaad u dirto emayl ama fariimo kale oo elektaroonig ah CHPW ama laxiriirta Adeegga, waxaad kulaxariirineysaa CHPW qaab elektaroonik ah waxaadna ogolaatay dib u eegistayada iyo falanqeynta fariimahan oo kale iyo inaad hesho isgaarsiinta soo noqoshada, haddii ay jirto, annaga si elektaroonig ah. Waxaad ogolaatay in dhamaan heshiisyada, ogeysiisyada, shaacinta, iyo isgaarsiinta kale ee aan ku siino adiga si elektaroonig ah ay u qancinayaan shuruud kasta oo sharci oo ah in isgaarsiinta noocaas ah ay ahaato mid qoraal ah.
Afeef of damaanad
In kasta oo CHPW ay xaq u leedahay inay saxdo wixii khaladaad ah, wixii dhaafitaan ah, ama wixii khaldan, haddana ma matalno in Adeeggu u shaqeyn doono si aan kala go 'lahayn ama qalad ah, mana bixinno wax ballan qaad ah oo ku saabsan helitaanka ama adeegsiga Adeegga.
CHPW IYO SADDEXDA XILDHIBAAN EE SOO IIBIYAYAASHA IYO QEYBTA SHAQAYNTA AYAA KA HADLAYA DHAMMAAN QARAXA AMA WAKIILAD LOO SAMEEYAY AMA DARAJOOYINKA KU SAABSAN MACLUUMAADKA, QOYSKA, ADEEGYADA, SHAQAALAHA, IYO KUWA KASTA OO KHARASHKA AH EE LAGA HELI KARO. UJEEDO GAAR AH, AMA XADGUDUB. DHAMMAAN MACLUUMAADKA NOOCA AH, NUXURKA AH, ADEEGYADA, BARNAAMIJYADA, MARKAYNTA, SAHALAHA, SHAQAALAHA IYO KHAYRAADKA KALE AYAA LAGA HELI KARAA “SIDII AY AH” IYO “SIDA LOO HELI KARO” OO AAN AAN LAHAYN HALIS KASTA OO NOOC AH. CHPW AYAAN LAHAYN LACAG LA'AAN IN MACLUUMAADKA LA SIIYAY API-yada AY QALAD KU NOQON KARAAN AMA IN HELISTU SII JIREY AMA LAGU QAADANAYN. KU DARA, CHPW MA SAMEEYSO WAKIILADO AMA DARNAAMIJO SI AY U SOO BAXDO SHARCIYADA DIIWAANADA API-KA AMA ISTICMAALKA ISTICMAALKA EE DIIWAANKA KASTA OO LAGU SOO SAARAY QAABKA AY KU DHAQAN YAHAY SHARCIGA LACAG LA'AAN AH,
Ilaa xadka ugu badan ee uu oggol yahay sharciga khuseeya, sinnaba munaasabad uma sameyn karto CHPW ama dhinacyadeeda saddexaad alaab-qeybiyeyaasha ama kuwa wax iibiya, ama shaqaalahooda ama shaqaalahooda, saraakiisha, agaasimayaasha, wakiillada, kuwa gacansaarka la leh, alaab-qeybiyeyaasha, iibiyeyaasha ama la-hawlgalayaasha (si wadajir ah, "Qeybaha" CHPW " ) wuxuu masuul ka yahay wixii toos ah, aan toos ahayn, khaas ah, ciqaab ah, shilalka ah, ku dayashada, ama waxyeelooyinka ka dhalan kara, ama waxyeello kasta oo ay keento lumis kasta oo adeegsi ah, luminta xogta, luminta macaashka, carqaladeynta ganacsiga, dacwadda, ama khasaare kale oo lacag ah. , ha ahaato mid ku saleysan jebinta qandaraaska, jirdil (oo ay kujirto dayacaad), mas'uuliyadda sheyga ama haddii kale oo ka yimaada ama si kasta oo ugu xirnaado adeegsiga, howlgalka ama waxqabadka adeegga, daahitaanka ama awood la'aanta adeegsiga, cilado kasta oo adeegga, ama bixinta, ama ku guuldaraysiga in la helo, wixii macluumaad ah, adeegyo, alaabooyin ah, agab ama agab kale ah oo laga heli karo ama laga heli karo Adeegga, xitaa haddii lagula taliyo suurtagalnimada d amages.
CHPW mas'uul kama noqon doonto adiga ama qof kasta oo kale oo karaya inaad aragto macluumaadka ama nuxurka ama cidda macluumaadka ama nuxurka la siin karo, wixii dib u dhac ah, khaldan, helitaan la'aanta, khaladaadka ama ka-dhaafitaannada ka jira ama gudbinta ama gaarsiinta dhammaan ama qayb kasta oo ka mid ah ama wixii dhaawac ah ee ka dhasha ama ku dhaca.
Hawlgalka Adeegga waxaa saameyn ku yeelan kara arrimo badan oo ka baxsan xakamaynta CHPW. Hawlaha Adeegga, ha ahaadaan kuwa loo yaqaan 'CHPW', alaab-qeybiyeyaasheeda ama kuwa wax iibiya, ma noqon karaan kuwo xasilloon. Khataraha amniga iyo arimaha gaarka ah lama tirtiri karo. Badbaadinta ereyga sirta ah iyo tallaabooyinka kale ee amniga ayaa laga yaabaa inaysan ka hor istaagin gelitaanka aan la oggolayn ee agabyada aad isticmaali karto ama u oggolaan karto dadka kale inay u adeegsadaan Adeegga, oo ay ku jiraan waxyaabaha la soo dhejiyay ama loo gudbiyay Adeegga.
Waad qiraysaa oo aad ogolaatay in xaddidaadaha masuuliyadeed ee kor lagu sheegay qaybtaan ay yihiin xubno aasaasi ah oo ka mid ah Shuruudahaan isla markaana Adeegga laguu siin doonin adiga oo ka maqnaada xadeyntaas.
Waxaad halkan ku raacsan tahay inaad difaacdo, magdhow siiso, oo aad si dhib la'aan ah u heysato Dhinacyada CHPW wixii mas'uuliyad ah, lumis ah, sheegasho iyo kharash ah (oo ay ku jiraan khidmadaha qareenka ee macquulka ah) ee la xiriira ama ka soo baxa adeegsiga waxyaabaha ku jira Adeegga, ama wixii agab ah ee aad soo gudbiso , boostada, ama ku gudbiya Adeegga, adeegsigaaga Adeegga, xiriirka aad la leedahay Adeegga, ku xadgudubka Shuruudahaan, ama ku xadgudubka xuquuq kasta oo qof kale leeyahay.
Adeeggu wuxuu ka koobnaan karaa xiriiriyeyaal, ama haddii kale la heli karo, goobo dhinac saddexaad ah, adeegyo, alaabooyin, macluumaad, nuxur ahaan, agabyo, shaqooyin, iyo / ama ilo kale ("Kheyraadka Qaybta Saddexaad"). Xiriirintaan iyo marin-u-helka waxaa loo bixiyaa adiga oo ku habboon oo keliya iyo tixraac. CHPW ma maamusho ilaha noocaas ah ee Xisbiga Saddexaad sidaa darteedna, mas'uul kama aha Kheyraadka Saddexaad ee noocan oo kale ah, ama wax kasta oo qoraal ah oo lagu dhajiyay ama ay diyaarisay Kheyraadka Saddexaad ee noocan oo kale ah. La soco in CHPW aysan xakamaynin, samaynaynin wax dammaanad qaad ah, isla markaana iska fogeynayso wixii matalaad ah ama caddayn ah ama damaanad ah ee ku saabsan Kheyraadka Noocan ah ee Saddexaad, oo ay ku jiraan xadidnaan la'aan amniga agab kasta, ama saxnaanta, ku habboonaanta, waqtiga, dhammaystirka, ama ku habboonaanta Ujeeddo gaar ah oo laga leeyahay macluumaadka ama ilaha ku jira ama ay diyaar ka yihiin ilaha Saddexaad ee Saddexaad ama bogagga kale ee internetka. CHPW waxay xaq u leedahay inay joojiso isku xirnaanta noocaas ah ama marin u helka waqti kasta. Xaqiiqda ah in CHPW ay bixiso xiriiriyeyaasha noocaas ah ama marin u helistooda waa inaan loo macneyn si kasta oo ay u tahay oggolaansho, oggolaansho, ama kafaala qaadka Kheyraadka Saddexaad ee Noocan ah, ama wixii macluumaad ah ee lagu heli karo. Sababtoo ah qaar ka mid ah Kheyraadka Qaybta Saddexaad waxay shaqaaleeyaan natiijooyinka raadinta otomaatigga ah ama haddii kale waxay kugu xiraan Kheyraadka Qaybta Saddexaad oo ay ku jiraan macluumaad loo arki karo mid aan habbooneyn ama meel ka dhac ku ah, masuul kama noqon karno saxsanaanta, u hoggaansanaanta xuquuqda daabacaadda, sharci ahaanta, ama qaddarinta waxyaabaha ku jira ama la heli karo by Kheyraadka Qaybta Saddexaad oo aad si aan macquul ahayn uga tanaasuli karto sheegasho kasta oo naga dhan ah annaga oo ixtiraamaya ilaha Saddexaad ee Saddexaad. Isticmaalkaaga Kheyraad Saddex-dhinac ah waxay ku xiran tahay shuruudaha, xaaladaha, iyo siyaasadaha Xisbiga Saddexaad ee lagu dabakhi karo alaabada, adeegyada, ama agabyadaas (sida shuruudaha adeegga ama siyaasadaha asturnaanta ee bixiyeyaasha alaabooyinkaas, adeegyada, ama agabkan) . CHPW mas'uul kama aha sirta iyo amniga wixii macluumaad ah ee aad la wadaagto Kooxdaas Saddexaad. Markaad doorato inaad ka hesho adeegyadan Qaybta Saddexaad, waxaad ogolaatay inaad hayso CHPW oo aan waxyeello u lahayn wixii adeegsi ah ee aan la oggolaan ama la siidinta macluumaadkaaga shaqsiyeed.
Haddii aad rabto inaad joojiso heshiiska aad la leedahay Shuruudahaan iyo Shuruudahaan, waad sameyn kartaa adiga oo ka gaabsada isticmaalka dheeraadka ah ee API-yada. CHPW waxay xaq u leedahay (inkasta oo aysan ahayn waajibaadka) inay joojiso marin u helka iyadoo ku saleysan Xeerka Isdhexgalka CMS iyo hagida sharciyeynta. Waxaad codsan kartaa CHPW si ay dib ugu hesho marinka API-yada adoo adeegsanaya cinwaanka emaylka taageerada ee ay bixiso CHPW ee API-yada. Haddii CHPW ay ku go'aansato ikhtiyaarkeeda ah in duruufaha u horseeday diidmada bixinta API-yada ama joojinta marin u helista API-yada aysan sii jiri doonin, markaa CHPW way soo celin kartaa marin-u-helkaaga. Dhammaan qodobbada Shuruudaha iyo Shuruudaha, waa inay ka badbaadaan joojinta, oo ay ku jiraan, iyada oo aan xadidnayn, afeefyada dammaanadda, iyo xaddidaadda mas'uuliyadda.
Taariikhda Cusboonaysiinta Ugu Dambeysa: Juun 29, 2021